Kenya, Algeria waxay codsadeen in loo kordhiyo waqtiga howlgalka AMISOM - Axadle Radio
Wasiirka Arimaha Dibada Kenya Raychelle Omamo waa dhiggeeda Algeria Sabri Boukadoum ayaa ka hadlay qorshe mideysan oo lagu kordhinayo waqtiga howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM).
Labada dowladood Kenya & Algeria wuxuu ka hadlayaa ujeedka Dowladda Nairobi ee ah inay kordhiso Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya Soomaaliya si loo xoojiyo doorka muuqda ee Askarta Afrika.
Raychelle Omamo ayaa sheegay in ciidamadu door muhiim ah ka ciyaaraan howlgalada amniga lagu sugayo ee ka socda Soomaaliya Midowga Afrika waxaana loo kordhiyay sanad walba si loo dhameystiro dib u habeynta Ciidamada Soomaaliya si ay ula wareegaan amniga.
Wasiirradu waxay tixgeliyeen miisaaniyadda Qaramada Midoobay ee AMISOM, haddana waxay soo jeedinayaan in iskaashiga iyo ka qaybgalka howlgalka ay muhiim yihiin. Sidaana waxaa lagu yiri war murtiyeed laga soo saaray kulankii u dhaxeeyay Wasiirada Arimaha Dibada ee Kenya iyo Algeria.
Wargeyska The Star magaalada Nairobi ayaa jimcihii lagu daabacay sheekada kulanka wasiirada arimaha dibada Kenya & Algeria waxaana diirada lagu saaray kordhinta waqtiga askarta AMISOM.
Muddada ugu badan ee cusbooneysiinta sanadka waa dhamaadka sanadka & bilawga bisha Janaayo, waxaana inta badan la socda ciidamo ajaanib ah oo ka socda wadamada Afrika muddo hal sano ah si ay u qiimeeyaan xaalada amaan ee Soomaaliya.
Bishii Oktoobar 2020, The Star wuxuu qoray in Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay sida ugu dhaqsiyaha badan ula wareegi doonaan mas’uuliyadda amniga dalkooda, iyadoo Ciidamada Difaaca Kenya ay ka baxayaan Soomaaliya si ay ugu oggolaadaan in Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed ay u madax bannaanaadaan.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) waxaa ku waayey askar iyo saraakiil ciidan, halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana la beddelayaa ciidamada lixdii biloodba mar, in kasta oo ay ka gaabiyeen sannadihii ay sii ballaarinayeen.
Marka, ma kafiican tahay Qaramada Midoobay in sanadkasta loo kordhiyo howlgalka AMISOM mise in laga qeyb qaato dib u dhiska ciidanka Soomaaliya?
Xigasho: Xiddiga / Axadle.
axadle 9050 posts